I-Mobile Legends: Bang Bang APK inguqulo yakamuva ye-9 Ansoli - imidlalo yamahhala yesenzo ye-android
Joyina abangane bakho embukisweni omusha we-5v5 MOBA wokuphikisana nabaphikisi bangempela babantu, Izinganekwane Zeselula: Bang Bang! Khetha amaqhawe akho owathandayo bese wakhe iqembu elifanele nabalingani bakho abasezandleni zakho! 10m isibili umdlalo wokulwa, izimpi zemizuzu eyi-10. Ukuthembela phansi, ukushushuluza, ukushesha umbhoshongo, izimpi zeqembu, bonke ubumnandi be-PC MOBAs nemidlalo yesenzo entendeni yesandla sakho! Yondla umoya wakho we-eSports!
Izinganekwane Zeselula: I-Bang Bang, ubuciko obusha be-eSports obusha be-2017. Chitha izitha zakho ngokuthinta umunwe wakho bese uthatha umqhele weChallenger enamandla!
Ifoni yakho yomela impi!
1. Amamephu we-MOBA wakudala, izimpi ezi-5v5
Izimpi zangempela ze-5v5 ezilwa nabaphikisi bangempela. Lwela imizila engaphezu kwemithathu ukuthatha umbhoshongo wesitha. Izindawo ezi-4 zehlathi. Imibhoshongo engu-18 yezokuvikela. 2 Amakhosi asendle. Ukuphindwa kabusha kwamamephu we-MOBA zakudala. Izimpi ezigcwele ngo-5v5, izimpi zoMuntu vs. Ukubuyela okunqobayo kwegeyimu yangempela ye-MOBA.
2. Nqoba ngokubambisana necebo
Vimbela ukulimala, ulawule isitha, futhi uphilise ababambisene nabo! Khetha kusuka kuTanks, Mage, Marksmen, Assassins, Supports, njll. Ukwengeza iqembu lakho noma ukufanisa i-MVP! Amaqhawe amasha akhishwa njalo!
3. Ukulwa okufanele, Thwala iqembu lakho ukuze unqobele
Njengama-MOBA asendulo, akukho ukuqeqeshwa kweqhawe noma ukukhokhela izibalo. Abaphumelele nabalahlekayo banqunywa ngokusekelwe kumakhono nekhono kule nkundla efanelekile nelinganiselayo yemidlalo yokuncintisana. Dlala ukuze uzuze, ungakhokhi ukuze uzuze
4. Izilawuli Ezilula, Kulula Ukwenza Kahle
Unophimbo lwenjabulo ebonakalayo ngakwesobunxele nezinkinobho zamakhono ngakwesokunene, iminwe engu-2 konke okudingayo ukuze ube yinkosi! Ukuzilawula ngokuzenzakalela nokuhlosiwe okuhlosiwe kukuvumela ukuthi ugcine ufinyelele kokuqukethwe kwenhliziyo yakho. Ungalokothi uphuthelwe! Futhi uhlelo olusebenzayo lwe-tap-to-kuandaa lukuvumela ukuthi ugxile empini yempi!
5. Ukuphindaphinda okubili kwesiBili, ukufana okungu-10 Minute
Ukwenza umentshisi kuthatha imizuzwana eyi-10, kanti izimpi zihlala imizuzu eyi-10, ukushwibeka phezulu komdlalo wokuqala wokuthula owenzelwe phezulu bese ugxumela ezimpini ezinkulu. Ukulinda okuyisidina nokulinda okuphindaphindayo, nezenzo ezivusa amadlingozi nokunqoba kwenqindi. Kunoma iyiphi indawo, nganoma yisiphi isikhathi, thatha ifoni yakho, ushise umdlalo, uzibethelele emncintiswaneni we-MOBA oshubile.
6. Isizo le-AI ye-Smart Offline
Kuma-MOBA amaningi, ukuxhumana okudonselwe phansi kusho ukulengisa iqembu lakho ukuze lome, kepha nge-Mobile Legends: Uhlelo lokuxhuma kabusha lukaBang Bang olunamandla, uma wehliswa, ungabuya empini ngemizuzwana. Futhi ngenkathi ungaxhunyiwe ku-inthanethi, uhlamvu lwakho luzolawulwa ngohlelo lwethu lwe-AI ukugwema isimo esingu-5-4-4.
NGICELA UQAPHELE! Ama-Legends Omakhalekhukhwini: I-Bang Bang imahhala ukulanda nokudlala, noma kunjalo ezinye izinto zomdlalo nazo zingathengwa ngemali yangempela. Uma ungafuni ukusebenzisa lesi sici, sicela usethe ukuvikelwa kwephasiwedi ngokuthenga kuzilungiselelo zohlelo lwakho lokusebenza lwe-Google Play Isitolo. Futhi, ngaphansi Kwemigomo Yensizakalo yethu Nenqubomgomo Yobumfihlo, kumele okungenani ube neminyaka eyi-12 ubudala ukudlala noma ukulanda izinganekwane Zeselula: Bang Bang.
Ungathola usizo lwensizakalo yamakhasimende ngenkinobho [yokuxhumana nathi] kulo mdlalo ukukusiza kunoma yiziphi izinkinga ongahlangabezana nazo ngenkathi udlala. Ungasithola futhi emapulatifomu alandelayo. Samukela yonke inganekwane yakho yeselula: Imicabango nokusikisela kweBang Bang:
I-imeyili ye [email protected]
Abasebenzisi Bokulinganisa: 13,713,564
Isilinganiso Sokuqukethwe: Teen
Igama Lephakheji: com.mobile.legends